YEYINTNGE(CANADA): Thursday, March 20
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/20/20140အကြံပြုခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံမှနိုင်ငံတကာသို့ပေးရန် US$ ၉.၅ ဘီလီယံကျော်ကြွေးကျန်ရှိနေ၊
၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာလကုန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံမှနိုင်ငံတကာသို့ပေးရန်
US$ ၉.၅ ဘီလီယံကျော်ကြွေးကျန်ရှိနေ၊
တရုတ်နိုင်ငံသို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း (၄၀၀၀)ကျော်နှင့် အများဆုံးပေးရန်ရှိ
မန္တလေးမြို့ ၊ လမ်း၆၀၊ ၂၉-၃၀လမ်းကြားရှိ Cafe ရှေ့ တွင် မနေ့ညက ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ၏ သားကို ဗမာစကားမပြောသောလူ (၂၀)လောက်က ၀ိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်ပြီး ကားကို ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်....
ရဲများရာက်ရှိ ထိန်းသိမ်းနေတာတောင် ဂရုမစိုက်ပဲ ဆက်လက်ထိုးကြိတ်ပြီး လာရောက်ထိန်းသိမ်းသော ရဲများကိုပါ ဆဲဆိုနေကြတယ်...
ဒီလူတွေ ဘာကြောင့်ဒီလောက် အတင့်ရဲတာလဲ???
မန္တလေးမြို့ ပာာ မြန်မာတွေနေတဲ့ မြို့  မပာုတ်တော့ဘူးလား???
မန္တလေးမြို့ ပာာ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိသောမြို့  မပာုတ်တော့ဘူးလား???
MH 370 ပျောက်ဆုံးမှုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဘီဘီစီ သတင်းထောက်ဝင်မရ
MH 370 ပျောက်ဆုံးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မတ်လ ၂၀၊ ၂၀၁၄ ရက်နေ့က Sama-sama ဟိုတယ်မှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ် ဘီဘီစီ သတင်းထောက်ဝင်မရ
ပျောက်ဆုံးမလေးရှားလေယာဉ်မှ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အပျက်အစီး အစိတ်အပိုင်းအစနှစ်ခု
ပျောက်ဆုံးမလေးရှားလေယာဉ်မှ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အပျက်အစီး အစိတ်အပိုင်းအစနှစ်ခုကို သြစတြေးလျ ရှာဖွေတွေ့ရှိ၊
လေယာဉ်၏ အပိုင်းအစများ ဟုတ်၊မဟုတ် စစ်ဆေးရမည်ဖြစ်သောကြောင့် အချိန်ယူရမည်ဖြစ်
နော်ဝေ ကားတင်ကာဂိုသဘောင်္ HOEGH ST. PETERSBURG ဟာ ပျောက်ဆုံးလေယာဉ် #MH370 နဲ့ဆက်စပ်နိုင်ဖွယ်ယူဆရတဲ့ အပိုင်းအစ၂ခုကို သြဇီဂြိုလ်တုက တွေ့ရှိထားတဲ့ ဧရိယာကို ပထမဆုံး ရောက်ရှိလာတဲ့ သဘောင်္ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ့သင်္ဘောဟာ မက်ဒက်ဂစ်စ်ကာကနေ မဲလ်ဘုန်းကို သွားနေရာကနေ သြစတြေးလျ ရေကြောင်းအာဏာပိုင်တွေရဲ့ အကူညီတောင်းခံမှုနဲ့ ၀၈၀၀ GMT မှာ အဲဒီ့ဧရိယာနားကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုလက်ရှိမှာ ရာသီဥတု အခြေအနေအရနဲ့ ညပိုင်းရောက်နေတာကြောင့် ရှာဖွေရေး မစတင်နိုင်သေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရေးဂြိုလ်တုကနေ ဖမ်းယူတွေ့ရှိတဲ့ သြစတြေးလျ အနောက်ကမ်းခြေဘက် ရေပြင်ထဲက ၂၄မီတာနဲ့ ၅မီတာလောက်စီ အရှည်ရှိတဲ့ အရာဝထ္ထု (၂)ခုဟာ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ မလေးရှားလေယာဉ် #MH370 နဲ့ ဆက်စပ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ သြဇီဝန်ကြီးချုပ် တိုနီအဘော့က ကြာသာပတေးနေ့မနက်မှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံ Perth မြို့နဲ့ အနောင်တောင်ဘက် ကီလိုမီတာ ၂၅၀၀လောက်မှာ တွေ့ရှိရတဲ့ အဲဒီ့အရာဝထ္ထုကို အတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက် သြစတြေးလျ စစ်လေယာဉ် ၂စင်း၊ အမေရိကန်နဲ့ နယူးဇီလန် လေယာဉ် တစ်စင်းစီ သွားခဲ့ပေမယ့် ပင်လယ်ပြင်ရာသီဥတုအခြေအနေအရ ရှာမတွေ့ဖြစ်ပဲ ညနေပိုင်းမှာ ပြန်လှည့်လာခဲ့ကြပြီး ရှာဖွေရေး လုပ်ငန်းတွေကို သောကြာမနက်မှ ပြန်လည်စတင်ပါမယ်။
နိုင်ငံတ၀န်းရှိ လစ်လပ်နေသည့် မဲဆန္ဒနယ် ၃၀ ၌ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ထပ်မံ ကျင်းပပေးမည်ဟု ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး က ပြောကြောင်း သိရသည်။ ယနေ့ ကျင်းပသည့် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် အစည်းအဝေး၌ လှည်းကူးမဲ ဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း က အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် လစ်လပ်နေသည့် မဲဆန္ဒနယ်များ၌ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ ပေးရန် ရှိမရှိ မေးမြန်းရာ ကျင်းပပေးမည်ဟု ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦး တင်အေး က ဖြေဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အချိန်တွင် ကျင်းပ မည် ဆိုသည်ကို တိကျစွာ ဖြေဆိုမှု မရှိခဲ့ပေ။
ဒီနှစ်၂၀၁၄ ခုနှစ် အတွင်းမှာကျင်းပမယ့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ လစ်လပ် မဲဆန္ဒနယ်မြေ အားလုံးမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် သွားမယ်လို့ NLD ပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ဒီကနေ့ ပြောလိုက် ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာဆိုရင် ပြည်သူပြည်သားတွေက ကိုယ့်နိုင်ငံ တိုးတက်ရေးအတွက် ကိုယ် တာဝန်ယူရမယ်။ နောက်ဆုံးကိုယ်ပဲ တာဝန်ယူရမယ်၊ ကိုယ်ရွေးလိုက်တဲ့ သူကို လည်း ကိုယ်ရွေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် တာဝန်ပေးတာပဲ။ ကိုယ့်ရွေးတဲ့သူကို ဘယ်လို လူမျိုး ရွေးတယ် ဆိုတာ ကိုယ့်မှာတာဝန်ရှိတယ်။
ကိုယ်ရွေးပြီးမှ မကြိုက်ပါဘူးလို့ ပြောနေလို့ရှိရင် ဒါလည်းပြောပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ် ။ ရွေးတာတော့ မှားနိုင်တာပေါ့။ နောက်တစ်ခါ မမှားစေနဲ့ပေါ့။ ဒီလိုပဲ လုပ်ရမှာပေါ့။
ဟိုဘက်က နိုင်လို့နိုင်တဲ့သူ ကို ချော်လဲအောင် လုပ်မယ်လို့ သူနိုင်သွားမှာစိုးလို့ ခလုတ် တိုက်အောင်လုပ်မယ်လို့။ ဒါမျိုးတွေဟာ မလုပ်သင့်ဘူး။ ဒါဟာ သိက္ခာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံရေး မဟုတ်ဘူး။
သိက္ခာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေး မလုပ်နိုင်လို့ရှိရင် ကျွန်မတို့နိုင်ငံဟာ တိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတော့ ကျွန်မတို့ အမြင်ချင်း မတူတာတွေရှိတယ်။ ဒါကတော့ ရှိမှာပဲ။ လူပဲ အမြင်ချင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူဘူးပေါ့။
၁၉-၃-၂၀၁၄ ၊ နေပြည်တော်
ကော့မှုးမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံစဉ်